Nezvedu - Nortech Engineering Corporation Limited
Mari yezvikamu NORTECH Engineering Corporation Limited ndeimwe yeanotungamira maindasitiri vharuvhu vagadziri uye vanotengesa muChina, ane makore anopfuura makumi maviri zviitiko zveOEM neODM services.
neTimu yekutengesa muShanghai, uye zvivakwa zvekugadzira muTianjin neWenzhou, China, tinopa mhinduro dzakasiyana kune vatengi vedu pasi rese.
Iyo yekugadzika base inovhara nharaunda ye16,000㎡ ine vashandi ve200 uye makumi matatu acho vari vakuru mainjiniya uye mahunyanzvi.
Tianjin Greatwall Kuyerera Valve Co., ltd,pamusoro rakaiswa vharuvhu mugadziri muChina, yekugadzira nzvimbo yemavharufuru mavharuvhu, cheki mavharuvhu uye strainers, iyo yakashanda seOmemi mugadziri wepasi rese anotungamira mavhavha emakambani.
Yakashongedzerwa neanopfuura zana seti esimbi yekugadzirisa & kucheka, machining uye kuyedza zvigadzirwa zvinosanganisira CNC michina, epamberi physio kemikari NDT, kuongorora kwepalral, michina yezvivakwa kuyedza, ultrasonic kukanganisa michina, ultrasonic ukobvu gags, zvakare kusimudza, zvekufambisa zvishongedzo.
Certified pamwe ISO9001, isu mukanyatsochengeta kutevedzera mureza muitiro yepamusoro kudzora.
CE / PED yakasimbiswa kuEuropean Union.
WRAS uye ACS yakasimbiswa yemvura yekunwa, izvo zvinosungirwa kumusika kuUK neFrance.
Shanghai ES-kuyerera maindasitiri Co., ltd,ine imba yekuchengetera, timu yekutengesa uye rutsigiro rwehunyanzvi, vane bhizinesi renji yekuchengetera, kugadzirisa uye kugovera mavharuvhu, uye zvakare kuyerera kudzora mhinduro kune vatengi vedu.
Nenhamba yakati wandei yezvikamu zvevharuvhu uye mavhavhari akazara futi, tinogona kuvimbisa pfupi yekuendesa nguva.
Hwakavimbika hunhu uye nekukurumidza kutumira kunotiita kuti timire kubva kumazana evanopa vheti muChina.
Our Main zvigadzirwa: Actuated mavharuvhu, pneumatic shavishavi vharuvhu, yemagetsi shavishavi vharuvhu, pneumatic bhora vharafu, yemagetsi bhora mavharuvhu, gedhi vharafu, tarisa vharuvhu, globe vharafu, strainers etc.
Yedu bhizinesi chiyero
Dhizaini uye kuumbwa
Valve stocking, kunyora uye kurongedza
Valve actuation, kugadzirisa uye kugadzirisa zvakare
Pane saiti rutsigiro
NORTECH mavharuvhu vari aivigirwa kuna America, Europe, Middle East uye Southeast Asia, izvo kugutsa vatengi vedu yepamusoro uye basa rakanaka.
Isu tinotenda kuti mhando yepamusoro, mutengo wemakwikwi uye basa rekufungisisa ndidzo tsigiro dzakasimba kwauri.
kukanda kwese kunopihwa kubva kumatenga epamusoro ane ISO9001 chitupa.
kunyatsogadziriswa machina evharuvhu inovimbisa hushoma hwekushandisa torque uye hupenyu hwakareba hwekushanda.
isu tinoshandawo pamwe neyemusoro yepamusoro vharuvhu inogadzira muchaina, nezvose zvitupa, zvinosanganisira ISO9001, CE, ATEX, Firesafe.